ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ ၊ ဥရောပကော်မရှင် Directorate General of Trade မှ Deputy Director General ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဘရာဇီး နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Antonio J.M. de Souzae Sliva နှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတ နိုင်ငံ၊ ယူနန်ပြည်နယ်၊ တဲဟုန်ပြည်နယ်ခွဲပြည်သူ့အစိုးရ၊ ဒုတိယအုပ်ချုပ်ရေးမှူး Ms. Wang Yu ဦးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့အား သီးခြားစီလက်ခံတွေ့ဆုံ ‹ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ ၊ ဥရောပကော်မရှင် Directorate General of Trade မှ Deputy Director General ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဘရာဇီး နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Antonio J.M. de Souzae Sliva နှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတ နိုင်ငံ၊ ယူနန်ပြည်နယ်၊ တဲဟုန်ပြည်နယ်ခွဲပြည်သူ့အစိုးရ၊ ဒုတိယအုပ်ချုပ်ရေးမှူး Ms. Wang Yu ဦးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့အား သီးခြားစီလက်ခံတွေ့ဆုံ
နေပြည်တော်	အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ သည် ဥရောပကော်မရှင် Directorate General of Trade မှ Deputy Director General Mrs. Helena Konig ဦးဆောင်သော အီးယူကုန်သွယ်မှုအခွင့်အရေးစိစစ်လေ့လာရေး အဖွဲ့နှင့် ယနေ့ နံနက် ၀၉:၃၀ နာရီအချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ အဆိုပါဝန်ကြီးဌာန အစည်း အဝေးခန်းမ၌ လက်ခံ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့်အတူ အလုပ်သမားရေးရာဆိုင်ရာ အမြဲတမ်း အတွင်းဝန် ဦးမျိုးအောင်၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဆိုင်ရာ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးအေးလွင် ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဝင်းရှိန်နှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် ILO နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသည့် အဓမ္မခိုင်းစေမှုပပျောက်ရေးစီမံချက်တွင်ပါရှိသည့် အဓမ္မခိုင်းစေမှု တားဆီးရေး ကျင့်သုံးမှုကောင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ အလုပ်သမားရေးရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ၏ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုနှင့် တိုးတက်မှု အခြေအနေများ၊ ကလေးအလုပ်သမားဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ အလုပ်သမားရေးရာ အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်ပေးနေမှုအခြေအနေများ၊ အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ် များနှင့် အလုပ်သမားရေးရာဆိုင်ရာ ဥပဒေနည်းဥပဒေများအသစ် ရေးဆွဲခြင်း/ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ရေး ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့် လက်ရှိဖြစ်ပေါ် တိုးတက်မှု အခြေအနေများဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့် အစီအမံများနှင့်ပတ်သက်၍အီးယူကုန်သွယ် မှုအခွင့်အရေး စိစစ်လေ့လာရေးအဖွဲ့ဝင်များ၏ ဆွေးနွေး မေးမြန်းမှုများကိုလည်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ အသေးစိတ်ပြန်လည်ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီး ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာအမြင်ခြင်း ဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
ဆက်လက်၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဘရာဇီးနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Antonio J.M. de Souzae Sliva အား နံနက် ၁၀:၃၀နာရီအချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ၏ ဧည့်ခန်းမတွင်လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် နှစ်နိုင်ငံအလုပ်သမားရေးရာကိစ္စရပ်များနှင့် လုပ်သားစစ်တမ်း/အိမ်ထောင်စု စစ်တမ်းကောက်ယူရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ၂၀၁၉ နှစ်လည် သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များတွင် ပူးပေါင်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားမည့် အစီအစဉ်များနှင့်ပတ်သက်၍ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
ဆက်လက်၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ၊ ယူနန်ပြည်နယ်၊ တဲဟုန်ပြည်နယ်ခွဲပြည်သူ့အစိုးရ၊ဒုတိယအုပ်ချုပ်ရေးမှူး Ms. Wang Yu ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား နံနက် ၁၁:၃၀နာရီ အချိန်တွင်နေပြည်တော်ရှိ ဝန်ကြီးဌာနအစည်းအဝေး ခန်းမတွင်လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသဖြစ်သည့် ယူနန်ပြည်နယ်၊တဲဟုန်ပြည်နယ်ခွဲအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံမှဝင်ရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိသည့် အလုပ်သမားများ တရားဝင်ဖြစ်စေရေးနှင့် အလုပ်သမားအခွင့်အရေးများအပြည့်အဝရရှိစေရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ တရားဝင်နေထိုင် အလုပ် လုပ်ခွင့်ရရှိရေးနှင့် နှစ်နိုင်ငံအလုပ်သမားစေလွှတ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ရေး အတွက် လိုအပ်သောအချက်အလက်များ နှင့်ပတ်သက်၍ အမြင်ခြင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။